Nagu saabsan - XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD
Xuzhou Minyan Import & Dhoofinta Co., Ltd., oo ku yaal mashiinnada dhismaha ugu caansan magaalada Xuzhou, Shiinaha. waa shirkad hi-tech gaar loo leeyahay oo isku dhafan nashqadda, wax soo saarka iyo iibinta EXCAVATOR ROCK BUCKET, EXCAVATOR EARTHMOVING BUKKET, EXCAVATOR SIEVE BUCKET, BUKKET Ilkaha, EXCAVATOR RIPPER, EXCAVATOR QUICK COUPLER dhammaan noocyadeenu waa ku habboon yihiin. Sida CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI never Marnaba ma joojinayno wanaajinta, waxaan dooneynaa inaan noqono kuwa ugu fiican warshadan, inaad ahaato mid lagu aaminay Excavator Bucket Manufacturer. Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno!
Waxyaabaha loo dhoofiyo Hawada Haydarooliga waa heerka warshadaha ee dhismaha, waxqabadka, awooda iyo kala duwanaanta. Baaskiiladayada Xaaqida waxay u dhigmaan mashiinka shaqada waxayna ku siiyaan waxqabadka ugu fiican ee suurtogalka ah dalabkaaga gaarka ah. Hadday tahay dhagaxa, goobta dhismaha ama dhirta - Baaldiyadeennu waxay xoogga saaraan awoodda buuxda iyo waxqabadka mashiinka hawsha ay hayaan si hufanna u dhammaystiraan hawsha.
Tiro aad u tiro badan oo cilmi baaris ah iyo jawaab celinta macaamiisha adduunka oo dhan ayaa lagu dhex daray naqshad baaldi kasta. Waxqabadka macaamil-macaamilku waa udub-dhexaadka nooc kasta oo baaldi ah. Baaldiyo badan oo heer-sare ah iyo takhasus gaar ah ayaa laga heli karaa xalalka qodista, qodidda, rarka iyo dhammeystirka. Waxaan haynaa sannado badan naqshadaynta iyo soosaarida baaldiyo qodista adduunka oo idil. Waxaad ku kalsoonaan kartaa tayada dhabta ah ee lagu dhisay baaldi kasta. Bajiyadahayaga ayaa lagu horumariyey laguna tijaabiyay qodista qashin qubka si loo helo nidaam leh waxqabad aan caadi ahayn iyo kalsooni. Loogu Sameeyay Dambe Dambe waxaa loogu talagalay loona dhisay qeexitaanno - damaanad qaadaya tayada iyo adkeysiga. Bir adag oo bir ah ayaa siisa cimri dherer iyadoo aan loo baahnayn saxan culus, saxan culus waxayna siisaa nolol dheer iyo culeysyo waaweyn. Bajiyadahayagu waxay leeyihiin ilaa 50% nolol duug ah oo dheeraad ah marka la barbar dhigo tartamayaasha caanka ah. Baaldiyadeenu waxay bixiyaan qaybinta culeyska ugu habboon halka ay ku dhejinayaan mashiinka. Qaabka baaldiyo waxaa loogu talagalay duugista ugu fiican, kordhinta awoodda-culeyska, iyo dayactirka oo yaraaday sida tixgelinta ugu weyn.
Waxaan inta badan soo saareynaa dhammaan noocyada baaldi qodista, sida baaldi Mini, baaldiga dhulka lagu sameeyo, baaldiga dhagaxa, baaldiga shaashadda, lamaanaha degdegga ah, ilkaha baaldiga iyo kuwa kale ee si fudud loo jeex jeexay loona kala jeexay. Waxaan sidoo kale soo saari karnaa dhammaan noocyada kala duwan ee baaldirada wax lagu qodo si waafaqsan shuruudahaaga. Soo dhawaynta baaritaanka waxaan damaanad qaadi karnaa qiimaha ugu hooseeya oo leh tayada ugu sareysa.